Budata Hawaii Photoreal Vol 1 + Vol 2 + Vol 3 FSX & P3D - Rikoooo
downloads 109 592
Emelitere na 30 / 04 / 2019:
- Nwelite kachasị ọhụrụ dị ka weebụsaịtị https://hawaii-photoreal.com
- Tụkwasịrị auto-people "Hawaii Autogen Vegetation BETA" na "Hawaii ọzọ ọdịnaya"
Emelitere na 23 / 10 / 2017:
- Auto-installer emelitere na mbipute 11
- Tụkwasị na 3 PATCH
- Mmezi gburugburu ebe obibi
- Kwunye a mmiri oghere gburugburu na PHBK
- Nwee ọgba aghara na-aga n'etiti JHM Kapalua Airport (Airports Airports) na Charles Reid auto-gen.
- Melite "Big Island" na v0.95. Melite "Maui" na v0.97.
Emelitere na 11 / 12 / 2015:
- Agbakwunyere ndị a add-ons: Hawaiian ọdụ ụgbọ elu Nkebi nke 1, Nkebi nke 2, Nkebi nke 3 (nke George Keogh), ntupu Hawaii 10m (nke Ray Taburet) Landclass (nke Charles Reid).
- Na-emelite PHMK ọdụ ụgbọelu Molokai, Lanai City PHNY, PHHN Hana, Kalaupapa PHLU, JHM Mauai West, PHJR John Rodgers Field, PHBK Barking Sands, NPS Ford Island, PHNG Kaneohe Bay, Princeville, Port Allen, Waimea, na Upolu.
- Mmelite ahụ gụnyere ụlọ, egwu, okporo ụzọ, anụmanụ, ndị mmadụ, ụgbọala, foto-ezigbo textures, ihe ndị a na-emegharị anya, okporo ụzọ, n'abalị textures na ihe ndị ọzọ!
- Nke kachasị ọhụrụ nke àgwàetiti ndị a: Niihau v.1.0, vii0.97, v.1.0 Kahoolawe, Lanai v.1.0, v.0.95 Maui, Molokai v.0.99, Molokini v.1.0, Big Island v.0.93 .
- Merging na mpịakọta atọ n'ime otu olu nke 6.17 GB.
Nke a bụ foto zuru ezu-ezigbo ebe mara mma nke mara mma! Nke a bụ ala nke agwaetiti Hawaii (United States). Mega mkpọsa a gụnyere akwụkwọ atọ dị iche iche gụnyere agwaetiti ahụ Niihau v.0.99, Oahu v.0.99, Kahoolawe v.0.99, Lanai v.0.99, Maui v.0.99, Molokai v.0.99, Molokini v.0.99, Big Island v.0.97. Emere ya Flight Sim Ezuru freeware.
Niile foto-textures bụ 1m / pikselụ na (ma e wezụga maka Molokai) akpaaka-na-ede na abalị. N'ezie, ọ bụghị naanị foto-ezigbo ebe ntụrụndụ, ikpochapụ ụsọ oké osimiri, iwepụ ihe ndị dị mma, ịhazigharị ụda igwe / ụda texụ na ọtụtụ ihe ndị ọzọ na-eme ebe a mara ezigbo mma.
Agụnyere, "ọdụ ụgbọ elu Hawaiian" add-onnke George Keogh na "Hawaii Autogen Vegetation BETA" na "Ihe mgbakwunye Nke Hawaii"
Ihe ngosi a bụ ihe zuru ezu ma dị mfe na Freeware!
I nwekwara ike inweta gbakwunyere mbipụta ebe a: https://hawaii-photoreal.com/plus-version/
1 Nke a download dị arọ nke ukwuu 5.77 GB ma ọ bụrụ na ị na-a Jumbo onye òtù a na-atụ anya ichere ọtụtụ awa nke nbudata oge. E kere eke a n'ime akụkụ 8. Mgbe nbudata nke hawaii_photoreal_vol_1_vol_2_vol_3.zip unzip ihe niile n'ime a na nchekwa ma pịa hawaii_photoreal_vol_1_vol_2_vol_3.exe na-amalite na akpaka nwụnye.
2 Ma ị bụ Jumbo so ma ọ bụ, iji budata nnukwu faịlụ dị ka nke a ọ bụ ike -atụ aro iji a download njikwa ọzọ karịa ndabere gị Internet Explorer ma ọ bụ Google Chrome ma ọ bụ Firefox nchọgharị. Rikoooo ukwuu kwadoro otu software dị na ndepụta a: https://www.techsupportalert.com/best-free-download-manager.htm
3 Mgbe ị wụnye ihe ngosi ahụ, ma ọ bụrụ na ọ dịghị na simulator gị pụtara na onye nkwụnye akpaka enweghị ike ime ka ihe ngosi ahụ dị na simulator site na scenery.cfg. Isi ihe kpatara nsogbu a bụ ikikere Windows, n'ezie, na ụfọdụ, Windows jụrụ ịhapụ onye nkwụnye akpaka iji gbanwee ihe nkiri scenery.cfg. Ọ bụrụ na ị nọ n'ọnọdụ a, jide n'aka na akaụntụ onye ọrụ Windows nwere ikikere nchịkwa (nkwenye zuru ezu).
The Big Island (Kona koodu ICAO: PHKO)
Hawaii na-mara dị Big Island zere mgbagwoju anya na steeti. Agwaetiti a ka na-eto eto ma ndị mejupụtara 5 agbọpụta ọkụ nke na gbawara n'out oge otú a akpụ agwaetiti. Otú ọ dị, a ole na ole n'ime ndị a agbọpụta ọkụ ndị ka na-arụsi ọrụ ike. The lava na-abịa site a agbọpụta ọkụ aga n'ime oké osimiri ma na-eke ọhụrụ ala.
Maui bụ àgwàetiti kacha ukwuu nke Hawaii. A na-emepe agwaetiti ahụ site na mgbawa ugwu. N'ihi nke a, a na-eme ya nke ọma. Maui dị ezigbo mma n'etiti ndị hụrụ ya n'anya. Site n'àgwàetiti ahụ, ị ​​nwere ike ịchọta apịtị humpback ma ọ bụ gaa na mmiri mmiri ma ọ bụ na-egwusi egwu na ụwa dị egwu nke mara mma. Enwere ike ịchọta ọtụtụ obodo ndị dị mma na agwaetiti ahụ. Obodo akụkọ ihe mere eme nke dị na Lahaina kwesịrị nleta.
Dị nnọọ ka ndị fọdụrụ na Hawaii Maui nwere ebe okpomọkụ. n'ihi ọnụnọ nke ugwu, enwere ike inwe nnukwu ọdịiche na ọnụ ọgụgụ isi. Ógbè dị n'ebe ọdịda anyanwụ nke Maui dị n'akụkụ nke dị n'akụkụ ebe ọdịda anyanwụ ma dị ezigbo ala. N'ebe ọwụwa anyanwụ site n'ugwu, ọ na-esi ísì. N'ihi ọdịdị nke ugwu, e nwere ihe pụrụ iche na Maui, nke a na-akpọ Maui Vortex. Ihe a na-eme ka a manye ifufe na ugwu ugwu nke ugwu Halaekalã. N'ebe ọdịda anyanwụ nke ugwu a, ọ na-ejikọta ya na Maui ma na-amanye ya n'ebe ndịda. N'ihi na a na-amanye ifufe site na windo ndagwurugwu ọsọ ọsọ. Olu ikuku si na nchikota kwusi na igwe ojii nke na-akowa ihe mere mmiri ozuzo ejighi mara ebe a.
Molokai bụ otu n'ime ndị kasị udo isuo. N'ihi na nke a na-ejighị ụdị na elu ọnụ ọnụ ugwu n'akụkụ ụsọ oké osimiri nke agwaetiti bụghị nnọọ ekwesị ka a dara oké ọnụ beach ebe. Otú ọ dị, na àgwàetiti ahụ bụ otu n'ime ndị kasị ezigbo ya na-akpatụbeghị aka n'àgwàetiti ndị a akipelago.
Molokai nwere ebe okpomọkụ na ihu igwe. Ka ifufe mgbe niile na-abịa site n'otu uzo ugwu enweghị Leeward ma ọ bụ Windward n'akụkụ ebe a, ya mere enweghị orographic mmiri ozuzo. Ọdịda na-ọzọ evenly gbasaa n'elu n'àgwàetiti ahụ. Kasị na mmiri zoo n'oge oyi. Summers nwedịrị kemgwucha akọrọ.
Lanai bụ agwaetiti dị egwu nke nwere ebe okpomọkụ nke ọdịdị ala ya na ebe okpomọkụ dị na gburugburu afọ. Ruo ọtụtụ afọ, a na-emechi agwaetiti ahụ n'ihu ọha, n'oge a, a pụrụ ịchọta ebe a na-eme ka a na-akụ akwụkwọ pineapple kasị ukwuu n'ụwa. Nke a bụkwa isi ihe mere ndị njem nleta na-aga n'àgwàetiti ahụ. Naanị otu obodo nwere ike ịchọta n'àgwàetiti ahụ: Lanai City nke bụ n'ezie obere obodo na ụlọ nkwari akụ.
Kahoolawe bụ agwaetiti kpọrọ nkụ. N'ihi enweghị mmiri ọṅụṅụ ọhụrụ, ọ na-abụkarị ndị a na-adịghị ahụkebe. N'oge akụkọ ihe mere eme, agwaetiti ahụ nwere ọtụtụ ebumnuche. Ọ bụ ogige ịta ahụhụ ụmụ nwoke, a na-eji ya dị ka ebe anụ ụlọ ehi na ebe ọzụzụ ọzụzụ ndị agha. N'oge a agwaetiti ahụ bụ ebe nchekwa.
Kahoolawe nwere igwe nke ebe okpomọkụ na oké ala ọdịda ọgụgụ. Nke a bụ n'ihi na ọ na-nsogbu na Leeward n'akụkụ nke Haleakalã ugwu mgbawa na naanị ala gbara osimiri okirikiri mpaghara na-enweta ụfọdụ ọdịda.
Foto si Prepar3D v2.3
Onye edemede: Flight Sim Jewels, George Keogh, Ray Taburet, Charles Reid